Kedu vitamin kachasị njọ ị takeụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ihe mgbakwunye iji zere - chọọ ngwọta
Ihe mgbakwunye iji zere - chọọ ngwọta
Kedu vitamin kachasị njọ ị takeụ?
VitaminC. Ikekwe otu kachasị ewu ewuvitamin mmeju,vitaminC na-eme n'ọtụtụ n'ụba n'ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri.
VitaminA na beta carotene.
Ọkt 7 2013
Kedu ihe mgbakwunye anụ ahụ na-ekwesịghị ijikọ ọnụ?
Fọdụ n'ime ihe ndị kachasị nwee nsogbu bụahịhịangwaahịa ndị a maara nke ọma, dịka wort St. John na Ginkgo biloba. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ahịhịa dị ka sage, flax seed, kranberị, goji berry, chamomile, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii nwere ike iso ụfọdụ ọgwụ obi na-emekọrịta ihe ma kpatara ọbara ọgbụgba.Febbọchị 6 2018
Kedu mmeju m kwesiri iri kwa ubochi?
Dabere na ndị na-ahụ maka nri, ndị a bụ ihe asaa dị n’ime Multivitamin gịKwesịrịNwere
Vitamin D. Vitamin D na-enyere ahụ anyị aka ịmịkọrọ calcium, nke bụ ihe dị mkpa maka ahụike ọkpụkpụ.
Magnesium. Magnesium bu ezigbo ihe oriri, nke putara na anyiga-emerịrịnweta ya na nri ma obuMmeju.
Na-a vitaminsụ vitamin na-enweghị ihe kpatara ya? Ọfọn, nke ahụ bụ isiokwu nke nyocha nke Wednesday n'izu a. See okwu. ♪ American Osteopathic Association na-eduzi nghoputa Harris nke chọpụtara na pasent iri asatọ na isii nke ndị America nwere avitamin ma ọ bụ na-eri ihe mgbakwunye nri na naanị ihe dị ka pasent iri abụọ na-anwale nke ọma maka erughị eru na-edozi ahụ, ihe mgbakwunye nri adịghị mkpa.
Olee ebe ara a si bia? Echere m na nhụjuanya vitamin a sitere na mkpa ọ bụla iji melite arụmọrụ anyị, ọdịdị ahụ ahụ na-enweghị isi nke a na-amanye anyị n'ebe niile. Echere m, ọ bụrụ na ị banye na Instagram, ọnụọgụ na-enweghị isi na ndị mmadụ nwere ara ara m. Ihe ka ọtụtụ n'ime ya bụ ịwa ahụ plastik, Photoshop ma ọ bụ FaceTune, ma ọ bụ ma eleghị anya, mgbe ụfọdụ ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ, ma ihe ndị ahịa na-eme bụ ka ha ree gị ngwaahịa na nkwenye ndị a na-akwadoghị.
Echere m, ugboro ole ka ị hụworo na-eme ka usoro ahụ gị ji alụso ọrịa ọgụ, na-ewu ahụ ike, na-ewu abs, nwere oge isii nke ike na-aga n'ihu na akara? Ọ na-eme oge niile na enwere m nnukwu nsogbu na ya. Ihe kacha ewute m bụ mgbe m hụrụ ka ndị ọrụ ahụ ike gbanwere bụrụ ndị ọkachamara IKA. Ọrịa nke M maara ndị ọkachamara niile.
Enwere ọtụtụ ndị ọkachamara a n’ebe ahụ na-azọrọ azịza niile, ma ọ bụrụ na ndị ọzọ nke ndị ọkà mmụta sayensị nwere ajụjụ, kwenye na nwoke a, enwere ụfọdụ oge ebe ihe akaebe na-egosi na mgbakwunye vitamin bara uru. Ọ bụrụ na dọkịta gị gwara gị na ị nwere obere vitamin D, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji tinye mgbakwunye .Ọ bụrụ na ị na-erikarị vitamin, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ị tooụ ya.
N'ime afọ ime, maọbụ ọ bụrụ na ị na-eche ị tụrụ ime, a na m atụ aro ndị ọrịa m ka ha were ihe mgbakwunye na-arụ ọrụ nri, ana m agwa gị ndị anaghị eri anụ n'ebe ahụ, ana m akwado ịgbakwunye na nke a kwa, jide, jidere, jidere, jide elu. Eleghi anya ị nweghị nke ọ bụla n'ime ọnọdụ ahụike ndị a. Dọkịta agwaghị gị ka ị rie mgbakwunye nri.
Yabụ ka anyị banye na nke ahụ ma lelee nsogbu nke ingestion a. Nke mbụ, ọtụtụ vitamin nwere ntakịrị, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ihe akaebe nke uru. Spend na-emefu ego, mana gịnị maka? Echere m na ọ bụrụ na ịchọrọ mmamịrị dị oke ọnụ.
Vitamin na-enye gị mmesi obi ike ụgha ahụ mgbe ị nwere ike ịsị, 'Oh, ekwesịghị m iri nri ndị a, aga m ewere multivitamin. Ọ ka mma iji oge na mbọ gị gbalịa ịgbanwe ndụ gị n'ụzọ ndị ọzọ bara uru. N'ụzọ dị ịtụnanya, egosila na ụfọdụ ihe mgbakwunye na-edozi ahụ iji belata arụmọrụ nke ọgwụ ndị a na-ahụkarị dị ka insulin ma ọ bụ Xanax, yabụ na ị ga-akpachara anya ka ọ ghara inweta nsị nke vitamin ndị nwere ike ịgbanye mmiri, mana maka vitamin ndị nwere ike ịba abụba, D, E , K, A, You nwere ike ibute onwe gị na nsogbu site na nsị n'ihi na ha nwere ike iwuli elu na ụlọ ahịa abụba gị.
Ihe ize ndụ kasịnụ na ị vitaminsụ vitamin bụ ihe a na-amaghị ama. Amaara m na nke ahụ na-ada ụda dị egwu. Ọ na-ada ụda dịka aha nkiri.
Mba mba. FDA anaghị enyocha ya. Ndị ụlọ ọrụ anaghị egosiputa nchekwa ma ọ bụ ịdị irè nke ngwaahịa ha na-ere.
Enwere m ike ịmeju nri nri ebe a ugbu a, wụsa ya na obere obere capsules ma debe ya na ya, ọ bụ iwu zuru oke. Laboratorylọ nyocha ndị na-azụ ahịa emeela nyocha ma chọpụta na ihe ndị dị n’ọtụtụ ihe mgbakwunye nri ekwekọghị n’ihe edere na aha ahụ. Achọpụtawo ngwakọta ngwakọta nke ngwakọta ọnwụ na-egbu egbu na imeju.
Iribiga ihe ókè na-eme ka e nwee ọtụtụ vitamin na-eme ka a ghara inwe kansa. Isi okwu m na vitamin bụ ma ọ bụrụ na dọkịta gị gwara ha ka ha nyere gị ma ọ bụ nwee mkpa ahụike, nọgidenụ na-ewere ha. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọrọ ha ka ha nọrọ mgbe ahụ dị gị mma, ma ọ bụ nwee akara ngosi na ị dị njikere ịta ụta maka ụkọ vitamin, gwa dọkịta gị ihe mbụ n'ihi na ọ naghị adịkarị.
Dịkwa ka dọkịta ọ bụla nwere obi eziokwu ga-agwa gị, ebe anyị maara ọtụtụ ihe banyere vitamin, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-amaghị. Onye ọ bụla nke na-ekwu na o nwere azịza niile na-ejupụta na ya. Nwee obi ụtọ na ahụike
Mmeju na-emerụ ahụ?
Enwere nsogbu ọ bụla na ịnara yaMmeju? Eeh. ỌtụtụMmejunwere ihe ndị na-arụ ọrụ nwere mmetụta dị ndụ na-arụ ọrụ n'ime ahụ. Nke a nwere ike ịme ha enweghị nchekwa n'ọnọdụ ụfọdụ ma mebie ma ọ bụ mebie ahụike gị.29 nke 2017 Nọvemba
Na-a vitaminsụ vitamin bụ imefusị ego?
Vitamin,Mmejuenweghi uru ahụike ọzọ, ọmụmụ na-ekwu. Akụkọ ọhụrụ na-ekwuna-ewere ihe mgbakwunyenwere ike ịbụ aigbu egoọ nwedịrị ike ịmerụ ahụ ike.07.17.2019
Enwere m ike iri vitamin C na zinc n'otu oge ahụ?
Kedu ọgwụ na nri m kwesịrị izere mgbena-a Vitaminụ Vitamin CỌzọZinc(Multivitamins na mineral)? Zerena-ewereihe karịrị otumultivitaminngwaahịa naotu ogebelụsọ na dọkịta gị agwa gị.Na-ewereyiri ngwaahịaọnụ nwere ikena-ebute nnyefere ma ọ bụ mmetụta dị egwu.16.11.2020
Enwere m ike iri turmeric na vitamin D ọnụ?
O nweghi mmekọrịta ọ hụrụ n'etititurmeric na Vitamin D3. Nke ana-emeapụtaghị na ọ nweghị mmekọrịta dị. Gwa onye na-ahụ maka ahụike gị oge niile.
Ihe mgbakwunye anụ ahụ nwere ike ịnwe mmetụta?
Ọgwụngwaahịanwere ikeNweta ihe egwu ndị a na-atụghị anya ya n'ihi na ọtụtụMmeju nwerenọ n'ọrụ nanweesiri ikemmetụtan'ime ahụ. Ọmụmaatụ, na-ewere a Nchikotaọgwụ nrima ọ bụ ijiMmejuya na ogwu ogwunwere ikena-ebute ihe na-emerụ ahụ, ọbụnadị nsonaazụ na-eyi ndụ egwu.
I kwesiri iwere zinc kwa ubochi?
Ndị mmadụ na-eji ọnụ ekwu okwuzinciji nyere aka na-emeso oyi, ma ọ nwere ike belata ịdị irè nke ọgwụ ụfọdụ ma kpatara nsonaazụ. Na-atụ aro kwa ụbọchị ego nkezincbụ 8 milligrams (mg) maka ụmụ nwanyị na 11 mg maka ndị okenye.
Kedu ihe ị na-ekwesịghị iji zinc?
Meeewere zincihe mgbakwunye na ọla kọpa, ígwè, ma ọ bụ phosphorus n'otu oge. Ọ kachasị mma iji ohere dị iche iche nke ngwaahịa ndị a ruo awa abụọ iche, iji nweta uru zuru oke site na mgbakwunye mgbakwunye nri ọ bụla.Mar 1 2021
Gịnị bụ n'elu 5 vitamin ị na-ekwesịghị iri?
Vitamin Iri Ise Nke I Kwesighi Inwe Otu Vitamin C. Ikekwe otu vitamin na-ewu ewu kachasị ewu ewu, vitamin C na-apụta n'ụba n'ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ. 2 Vitamin A na beta carotene. 3 Vitamin E. Long touted dị ka onye na-egbochi ọrịa kansa, vitamin E bụ ihe mgbakwunye ama ama. 4 Vitamin B6. 5 Multi-vitamin.
Onwere ihe mmebi di n’ime nri nri?
Mụtakwuo. Site n'enyemaka nke otu ndị ọkachamara ọkachamara nke ndị dọkịta nọọrọ onwe ha na ndị na-eme nchọpụta na-eri nri, Consumer Reports chọpụtara ihe mgbakwunye 15 na-emerụ ahụ. Ihe ize ndụ ndị ahụ gụnyere mmebi akụkụ ahụ, kansa, na ijide obi.
alaska ụgbọ elu igwe kwụ otu ebe
Kedu nke mgbakwunye kachasị mma iji zere?
11 Ndị Nlekọta Mgbakwunye mara mma iji zere. 1 # 1: Magnesium Stearate. May nwere ike ọ gaghị ama aha iwu ya, mana ị hụla magnesium stearate na arụ ọrụ. Ọ bụ akwa ntụ ntụ na-acha ọcha ị ga 2 # 2: Sodium Benzoate. 3 # 3: Titanium dioxide. 4 # 4: Silicon dioxide. 5 # 5: Magnesium Silicate. Ihe ndị ọzọ